Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trinidad neTobago Breaking News • Akasiyana Nhau
As of may 15th pakanga pasina zvitsva Covid-19 kesi dzakanyorwa muTrinidad neTobago kwemazuva gumi nemapfumbamwe apfuura. Izvi zvakataurwa kunyangwe bazi rezvehutano richiramba richiita zvese zvavanogona kudzikamisa kupararira kwehutachiona uhwo hwakatotora hupenyu husere. Huwandu hwakazara hwezviitiko saka hwakamira pa19.
Musi waMay 11th Hurumende yakatanga kubvisa zvirambidzo kutanga nenzvimbo dzechikafu dzinosanganisira vatengesi vechikafu mumigwagwa vanobvumidzwa kuita masevhisi ekutora chete. Uye zvakare, zvitoro zvehurdware zvakabvumidzwa kuvhura kwemaawa akareba. Vanoona nezvehutano asi zvakadaro vanoramba vachisimbisa kukosha kwekuita zvekusimudzira muviri, kupfeka masiki uye kushambidza maoko nguva zhinji kuti zvidzivise kumuka patsva kwezviitiko.
Sechikamu chekudzikiswa kwekugara kwekugara pamusha, zvinotarisirwa kuti chikamu chekugadzira uye kuvaka chikamu chevoruzhinji chichavhurwa muna Chivabvu 24 chinomiririra chikamu chechipiri chematanho matanhatu ekuvhura hupfumi. Munguva yekutanga kwechikamu chetatu makadhi eChikumi 7th vese vashandi veveruzhinji vanofanirwa kudzokera kubasa kana nguva yenguva nenguva uye mamwe marongero ebasa remasikati ari kuzotarisirwa. Pachave nekuongororwa kwekufambira mberi pane zvakatarwa nguva kuti uone kana kugadzirisa kune zvikamu kungagone.
Bazi rezvehutano rakati 2,576 sampuli dzakapihwa kuCARPHA uye neUWI, St Augustine nzvimbo, nepo vanhu 107 vapora. Murwere mumwe chete ndiye anosara muchipatara senge mangwanani eMay 15.